Real Madrid Oo Diyaar U Ah Inay Iska Dirto Eden Hazard Haddii Uu Yimaado Kylian Mbappe
Home Horyaalka France Real Madrid oo diyaar u ah inay iska dirto Eden Hazard haddii...
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay u ogolaato Eden Hazard inuu ka tago kooxda inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan haddii Kylian Mbappe uu yimaado Bernabeu.
Hazard ayaa ku dhibtooday inuu iska muujiyo Los Blancos tan iyo markii uu 2019 ka soo wareegay Chelsea, isagoo dhaliyay kaliya afar gool 35 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
30 jirkaan ayaa haatan la maqan dhaawac kale oo muruqa ah, dhanka kale, laakiin waxa uu qandaraas kula jiraa Bernabeu ilaa dhamaadka ololaha 2023-24.
Sida laga soo xigtay AS , Madrid ayaa diyaar u ah inay iska dirto xiddiga reer Belgium haddii ay ku guuleystaan ​​saxiixa Mbappe, kaasoo weli lala xiriirinayo inuu ka tagayo Paris Saint-Germain .
Xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa la filayaa inay iibiyaan kooxda heysata horyaalnimada Faransiiska xagaagaan haddii uusan saxiixin heshiis cusub, Madrid ayaana la sheegay inay si aad ah u ugaarsaneyso sidoo kale Liverpool ayaa tartanka ku jirta.
Agaasimaha isboortiga PSG Leonardo ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in go aan laga gaari doono mustaqbalka Mbappe dhawaan.
Previous articlePirlo oo ka hadlay xaalada dhaawac ee Paolo Dybala.
Next articleManchester United iyo Manchester City oo u dagaallamaya Dayar ka tirsan Kooxda Toronto